सिभिल बैंकको साढे १७ लाख संस्थापक शेयर कर्मचारी सञ्चयकोषले किनेकाे छ । सिभिल बैंकको संस्थापक शेयर आधार मूल्यमै कारोबार भएको छ। बैंकले संस्थापक शेयरधनी सिर्जना शाक्यको शेयर बिक्रीको लागि बोलकबोल आह्वान गरेको थियो। बोलकबोलको क्रमममा शाक्यको शेयर कर्मचारी सञ्चयकोषले आधार मूल्यमै पाएको हो।
बिहीबारदेखि राजस्व र करको लागि पैसा जोहो गर्ने दवाव कम हुने छ। साथै नेपाल राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीतिको अन्योलताले पनि शेयर बजारलाई प्रभावित पारिरहेको छ। बुधबार कारोबार सुरु भएको केही समयदेखि बजार लगातार ओरालो झरेको थियो। अन्तिम समयमा केहि सुधार हुने संकेत देखिए पनि बजार १.१२ अंकको गिरावट सँगै रोकिएको छ।
आजदेखि नयाँ नोट साट्न पाईने, कहाँ कहाँ छ सुविधा?
बैङ्क जत्तिकै बलिया बन्दै सहकारी, आफ्नै भवन र एटीएमसमेत सञ्चालन
भाेलिदेखी यी बैंकहरूमा साट्न सकिन्छ नयाँ नाेट
आयाे सय रुपैयाँको नयाँ नाेटमा बुद्ध नेपालमा जन्मिएकाे म्यासेज
रिलायबल नेपाल लाइफको “रिलायबल समुन्नति जीवन बीमा योजना” सार्वजनिक
ह्याकरले फेरी लुटे कृषि विकास बैंककाे ३ करोड, काे-काे परे पक्राउ ?
जनता बैंकका शेयरधनीलाई बोनस शेयर तथा नगद लाभाँश
अब सयको नोटमा बुद्धको तस्बिर